Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 1:32 pm WARBIXIN XIISO LEH: SHIRKAD JABAANIIS AH OO SOO SAARTAY KOODH KA HORTAGAYA HARGABAKA
Saynis Yahanada Jabaan ayaa ikhtiraacay koodh nooca ganacsiga ah (business suit) kaasoo ka hortagaya hargabka siday sheegeen.
Koodhkan oo qiimihiisu dhan yahay £365 ayaa laga sameeyay dun khaas ah, duntani oo lagu daray macdanta titanium dioxide oo la sheego inay burburiso bakteeriyada lana dagaalanto cudurada marka ay la falgasho iftiinka.
Koodhkan ayaa loo nashqadeeyey sidii uu uga hortagi lahaa fayraska hargabka doofaarka keena ee A H1N1, waxaanay ugu talo galeen nimanka sameeyay inay lacag badan kaga helaan gaar ahaan wakhtigan dadku aad uga argagaxsan yihiin fayruska A H1N1 ee hargabka doofaarka keena.
Haruyama oo kamid aha nimanka koodhkan ikhtiraacay ayaa sheegay inuu koodhkani samayntiisu qaadatay muddo kabadan halsano, iyo in tijaabooyinkii lasameeyeen xaqiijiyeen inuu si wax ku ool ah u burburiyay fayraska A H1N1, taasi oo xafiisyada ka dhigaysa kuwo intii hore ka amaan badan.
Shirkaddu illaa hadda waxaa ay samaysaa koodhadh ah kuwa ragga, laakinse waxaad ku gali kartaa sharad in koodhadhka loogu talo galay hablaha yaryar ee dugsiyaddu aanay waxba ka danbay doonin.
Cabdirashiid Ibraahim Yuusuf